Kulimale abangu-9 engozini yeloli namatekisi eW Cape | News24
Kulimale abangu-9 engozini yeloli namatekisi eW Cape
Johannebsurg - Kulimale abantu abangu-9 ngoMsombuluko ngesikhathi iloli lishayisa amatekisi amathathu eGrassy Park eWstern Cape, kusho abosizo lokuqala.
Okhulumela i-ER24 uRussel Meiring uthe abosizo lokuqala, abe-Life Healthcare kanjalo nabeMetro Services bafike endaweni yesigameko bafica iloli liphakathi nomgwaqo, amatekisi wona abeseceleni komgwaqo.
OLUNYE UDABA:Kulimale unogada kubanjwa inkunzi imoto yemali eThekwini
"Abagibeli batholakale bezihambela endaweni yesigameko njengoba besebephumile ezimotweni. Abosizo lokuqala bahlole abagibeli bathola ukuthi bangu-9 abalimalile. Ngenhlanhla, akekho obesesimeni esibucayi," kusho uMeiring.
"Abalimalile balashelwe endaweni yesigameko ngaphambi kokuphuthunyiswa esibhedlela esiseduzane beyoqhubeka nokwelashwa."
UMeiring uthe imbangela yesigameko ayaziwa kodwa iziphathimandla bezisendaweni yesigameko ziyophenya.